MCare - Ndị na-eme nde
Ọrụ Immigrashọn: 22156. Ọrụ Iwu: 19132. Ọrụ IT: 1000+ jectslọ Ọrụ Na-arụ Ọrụ: 26742. Ma Na-agụta.
nzọụkwụ 1 : Chọpụta mkpa onye / ezinụlọ / azụmahịa.
nzọụkwụ 2 : Nhọrọ nke ohere kacha mma / Nhọrọ maka ihe ịga nke ọma na ebumnuche na ebumnuche.
nzọụkwụ 3 : Na-ezipụ nhọrọ kacha mma maka nnabata.
nzọụkwụ 4 : Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, nleta nleta na mba ahụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ebe ahụ.
nzọụkwụ 5 : Mụọ ihe ga-ekwe omume.
nzọụkwụ 6 : Ndụmọdụ ego na ụtụ isi, ọ bụrụ na ọdabara.
nzọụkwụ 7 : Isi na nkowa zuru ezu banyere ohere ndị enwere ike.
nzọụkwụ 8 : Nlekọta na usoro.
nzọụkwụ 9 : Nkwadebe na ido onwe ya n'okpuru ndị ọchịchị dị mkpa.
nzọụkwụ 10 : OMA!
United States of America (28 United States)
Anyị anaghị akwado ma ọ bụ nye ọrụ anyị n'okpuru ụdị aha ndị a kpọtụrụ aha na Onye ọ bụla na / ma ọ bụ azụmaahịa